Powder Oxiracetam manta (62613-82-5) Mpanamboatra - Chemical Phcoker
Ny vovo-dronono Oxiracetam dia nodinihina ho fitsaboana mety hampihena ny fahatsiarovana mifandraika amin'ny aretin'i Alzheimer sy ny neurolojia hafa ……….
Rano Oxiracetam poopy (62613-82-5) video
Rohato Oxiracetam roah (62613-82-5) Specifications
Product Name Roiro Oxiracetam vovoka
Anarana simika 2- (4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide
molekiolan'ny Wvalo 158.15
mitsonika Point 165-168 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 8 ora
Application Nootropic. Analogy of Piracetam with activity of psychostimulant.
Rohato Oxiracetam (62613-82-5) Famaritana
Ny molekiola Oxiracetam Raw dia singa Piracetam ary manintona ny rafi-pitabatabana ao an-toerana, mampiroborobo ny metabolismy ao amin'ny atidoha, mihamitombo tsy mitsaha-mitombo ary mampiroborobo ny fitehirizana fahatsiarovan-tena, ary mitazona ny fahatsiarovan-tena sy ny fihenan'ny saina. Mampiasaina izy io mba hanasitranana ny aretina ara-tsaina sy aretina ara-tsaina. Izany dia afaka manatsara ny fahatsiarovan-tsaina sy ny fahaiza-manaon'ny fahaiza-manao amin'ny marary amin'ny alim-pandrenesana an-tsokosoko na ny aretin'ny fahatsiarovana Mety tsara amin'ny fitsaboana ny disadisa eo amin'ny neurine, ny aretim-pahatsiarovana sy ny aretina amin'ny faharanitan-tsaina vokatry ny fahasimban'ny atidoha. Azo ampiasaina koa izy io ho fitsaboana ho an'ny neurôsis, trauma amin'ny atidoha, encephalitis, ary aretina atidoha hafa. Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny vovo-dronono Roira Oxiracetam dia ny tsy fahampian'ny rano amin'ny rano, ka mahatonga azy ho azo ampiasaina. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny poezia Raw Oxiracetam dia manana fikarakarana ara-pihariana ambony ary misy fiantraikany mahatsiravina raha oharina amin'ny Piracetam.
Oxiracetam powder (62613-82-5) Mekanisma amin'ny asa
Ny oxiracetam dia miaro amin'ny alàlan'ny proteinina amperinan'ny scopolamine na eo amin'ny populations sy ny isan'ny olona, ​​ka manoro hevitra fa afaka manampy amin'ny famerenana ny fitsiriritana sy ny toetran'ny olona hafa amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fitehirizana ny asetylcholine mahazatra toy ny singa fototra.
Ny Oxiracetam dia naseho mba hampitombo ny fanafiana acetylcholine ao anatin'ny sela hippocampal. Satria ny acetycholine dia tafiditra amin'ny asan'ny fanamafisana ny fahatsiarovan-tena, mety mitaky ny fiantraikany tsy mitongilana izany.
soa of Oxiracetam powder (62613-82-5)
soso-kevitra Oxiracetam powder (62613-82-5) Dosage
Side effects of Oxiracetam powder (62613-82-5)